Kujekesa hakuna kufanana neKukanganisa: Inguva yekumira Kushandisa Zviratidzo Kuyera Kukosha | Martech Zone
Kujekesa hakuna kufanana neKukanganisa: Inguva yekumira Kushandisa Zviratidzo Kuyera Kukosha
Muvhuro, July 15, 2019 Muvhuro, July 15, 2019 Shannon Tucker
Chii chinonzi Zviratidzo?
Zviratidzo ndiyo huwandu hweanogona kuitika emaziso pane yako nyaya kana pasocial media positi zvichibva paanofungidzirwa vaverengi / vanoona yeiyo nzira / sosi.
Muna 2019, zvimiro zvinoseka kunze kwemba. Hazvisi zvakajairika kuona zvinoonekwa mumabhirioni. Kune vanhu vanosvika mabhiriyoni manomwe pasi pano: vanenge bhiriyoni rimwe chete havana magetsi, uye vazhinji vacho havana basa nechinyorwa chako. Kana iwe uine 7 bhiriyoni maitiro asi iwe ukabuda kunze kwemukova wako uye hapana kana munhu mumwe anogona kukuudza nezvenyaya yacho, iwe une nhema metric. Pasina kutaura, mangani ako ehukama paruzhinji maficha ari mabhoti chete:
Mabhoti akatyaira angangoita 40% yeese Internet traffic muna 2018.
Distil Networks, Zvakaipa Bot Chirevo 2019
Funga nezvemishumo yako yekota yekudzokorora sechibvumirano pakati pesangano nePR agency kana pakati pako nemubati wako - aya ndiwo marondedzero atingaita budiriro uye nekubvumirana kwatinoita kuyera izvi. Unogona kunge uchiri kuda kupa zvionekwe nekuti mutengi kana mukuru wako anozvikumbira. Nekudaro, hunyengeri kuita zvinhu zviviri:
Tipei chinyorwa pane izvo zvimiro
Tipei mamwe metric izvo taura nyaya iri nani.
Kutsiva kwehukama neruzhinji metric kunogona kusanganisira:
Nhamba yekutungamira kana shanduko. Maonero ako anogona kukwira kumusoro kwekota kuenda kukota, asi kutengesa kwako kuchiripo. Izvi zvinodaro nekuti iwe unogona kunge usiri kunangana nevanhu chaivo. Tora pfungwa yekuti mangani anotungamira auri kugadzira.
Kuongorora kwekuziva: Uchishandisa chishandiso chakaita seSurvey Monkey, vanhu vangani vakaona chigadzirwa chako kana danho munhau uye vakaita kana kuchinja hunhu nekuda kwayo?
Google Ongororos: Tarisa spikes muwebhu traffic kana nhau dzako dzakamhanya. Kana icho chinyorwa chiine backlink, tsvaga kuti vangani vanhu vakadzvanya kune yako webhusaiti kubva kuchinyorwa uye ona kuti inguvai yavakapedzera ipapo.
A / B yokuedzwa. Daidzira chigadzirwa nyowani kana kutengesa kuburikidza nevezvenhau uye vezvenhau asi vape akasiyana makodhi ekusimudzira kuti vaone kuti ndeipi inotyaira traffic yakawanda (midhiya kana yemagariro).
Kuongorora kwemessage: Mangani mameseji ako akakosha akaiswa muzvinyorwa? Hunhu pamusoro pehuwandu hwakanyanya kukosha.
Funga izvi: kunyepedzera uri mukamuri pamwe nevanokwikwidza. Unogona kunge uchidanidzira zvakanyanya-asi vakwikwidzi vako vakadzikama vari kushandisa PR kutyaira kutengesa, kuwedzera ruzivo, uye kuita shanduko.
Zvakanaka PR ndezve kushandisa midhiya kuita mutsauko-uye kutsvaga chaiyo metric kuti uone kana iri kushanda.
Tags: ab testkuzivabots
Shannon inyanzvi yekudyidzana neruzhinji inowana vatengi munhau. Shannon anotenda musimba rehukama hweveruzhinji hwakabatanidzwa nekubatanidza midhiya yakawanikwa, kubhadharwa, uye kuve neyayo Shannon ndiye Mutungamiriri Mukuru Media Relations kuSSPR.
Iko Kukosha kweConnector maringe neIye Anofurira
Matipi kubva Kumusoro-Shanduko Sites